Shiinaha Custom cabbirkoodu yahay midabyo kala duwan oo isku dhafan faraskii waxsoosaarka Warshad iyo Warshad | Farshaxan Fiican
Lambarka Moodalka: FMI-219
Waxyaabaha: marmar dabiici ah
Faras qurxoon oo leh afar lugood oo qaro weyn oo si fiican u dheelitiran. Jidhku aad buu u siman yahay, sida inuu saliideysan yahay oo dhalaalayo. Timaha qoorta ayaa si isdaba joog ah u laalaada.
Labada dhegoodba kor ayaa loo taagay, oo la dhageysanayaa dhaqdhaqaaqa ku hareeraysan wakhti kasta, sida haddii ay taagan yihiin. Laba indhood oo waaweyn ayaa had iyo jeer agagaarka gaaf wareegaya, dabadheer oo marmar is laalaada, marna dhinac iyo dhinac u wareegta, afarta lugood ee dhaadheerna ay u eg yihiin afar tiir oo dhumuc weyn leh oo leh awood weyn.
Faraska Carabta waa faras qadiim ah oo qaali ku ah dunida. Archaeology waxay ogaatay inay asal ahaan ka soo jeedaan 4,500 oo sano ka hor, kuna dhashay Jasiiradda Carabta. Si taxaddar leh ayaa loo xushay oo loo kariyay muddo dheer xaaladaha abaarta, roob yar iyo cunto la'aan. Faraskani wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray sameynta noocyo fara badan oo faras adduunka ah. Fardo si fiican loo yaqaan, fardaha Orrov, fardaha Morgen, iwm, dhammaantood waxaa ku jira dhiigga fardaha Carabta.
Celceliska farasku wuxuu leeyahay 24 lafdhabar ah, halka faraska Carabtuna leeyahay 23 oo keliya. Madaxu waa yar yahay waana nadiif yahay, indhuhuna way weyn yihiin oo dhalaalayaan, qoorta waa toosan tahay, wejiga waa ballaadhan yahay, gaashaanku waa sareeyaa, dhabarka iyo dhexda ayaa gaagaaban oo xoog badan, lafuhu waa khafiifayaan oo way adag yihiin, addimada waa khafiif yihiin, muruqyada waa la horumariyaa, jidhkuna waa qallalan yahay, jaakaduna way jilicsan tahay sida xariirta oo kale, awoodda tarankuna waa mid xoog badan. nolol dheer. Qaab dhismeedka jidhku waa mid si wanaagsan loo dheellitiray oo qurux badan. Waa faras heer sare ah oo wata faras carbeed gaar ah. Xawaaraha-masaafada-gaaban uma wanaagsana sida loo yaqaan 'English thoroughbred', laakiin tartanka masaafada dheer wuu fiican yahay. Muuqaalkiisa wanaagsan iyo awooddiisa awgood, noocyada qaar waxay ku tiirsan yihiin soo bandhigida fardaha Carabta si ay u horumariyaan muuqaalkooda oo ay u horumariyaan awooddooda.
Fardaha Carabta ayaa isbaddelay oo ku koray cimilo lama degaan ah. Iyagu waxay u haystaan ​​inay yihiin hanti ay leeyihiin reer baadiyaha. Badanaa waxaa loo qaadaa guri waxaana lagu ilaaliyaa teendhooyinka. Sababta oo ah xiriirka dhow ee ay la leeyihiin aadanaha, waa kuwo naxariis badan, caqli badan oo diyaar u ah inay ka farxiyaan. Sidoo kale waxay leeyihiin awood maskaxeed iyo feejignaan sare, waxayna ku habboon yihiin weerar iyo dagaal. Sababtoo ah isku-darnaanta is-beddelka iyo dareenka, milkiilayaasha faraska casriga ah ee Carbeed waa inay bixiyaan dulqaad iyo ixtiraam ku filan oo ay ku xakameeyaan.
Xaragadaani qurxoon ee Carbeed waa haybad iyo xarrago, oo lagu soo bandhigay marmar qurux badan oo isku dhafan. Mucjisada quruxda badan ee uu farshaxaniste abuuray waxay leedahay faahfaahin aad u fiican iyo waaqic dhammaystiran. Iyada oo salka leyliga uu yahay asalka, isla markiiba ku dar qurxinta banaanka.
Hore: Taallo marmar madow ah oo taallo marmar gorgor ah oo iib ah
Xiga: Midab cad oo tayo wanaagsan leh Marmar Faras
Midab casaan socod libaaxyo libaax socod ah
White Marble Winged Lion Statue oo leh laambad iib ah
Taallo marmar gorgor madow leh taallo ...
White Marble Libaaxa Qoyska Taalada Xannaanada Xoolaha ...
Taallo waaweyn oo Marmar Caddaan ah oo leh Taallo Kubadeed ...
Taallo faras qurux badan oo midabkeedu yahay ...